LibreOffice 7.1 Na-abịa site na Mbipụta Nkewa, Atụmatụ Egwu na More | Site na Linux
LibreOffice 7.1 bia na Edition Splitting, Experimental Features, na More
Akwụkwọ Document kwupụtara mwepụta nke ohuru nke office office FreeOffice 7.1. Na nkwadebe maka mwepụta, ndị ọrụ nchịkwa dị ka Collabora, Red Hat, na CIB mere 73% nke mgbanwe ndị a, ọ bụkwa ndị nwere onwe ha nyere onyinye nke 27%.
Na ọhụrụ version, ndị mmepe nyochara echiche nke kewara ha n'ime nhazi obodo ("LibreOffice Community") na ezinụlọ nke ngwaahịa maka ụlọ ọrụ ("LibreOffice Enterprise"). Akpọrọ ụdị nke LibreOffice 7.1 a bụ "Obodo", ndị na-anụ ọkụ n'obi ga-akwado ya, na ebughi ya maka iji azụmaahịa.
Maka ụlọ ọrụ, a na-atụ aro ka ị jiri ngwaahịa nke ezinụlọ LibreOffice Enterprise, nke ụlọ ọrụ ndị metụtara ga-enye nkwado zuru oke na ikike ịnata mmelite ogologo oge (LTS). LibreOffice Enterprise gụnyekwara atụmatụ ndị ọzọ dịka SLA (nkwekọrịta ọrụ ọkwa).
Koodu na ọnọdụ nkesa na-adị otu, yana LibreOffice Community dị na enweghị mmachi nye onye ọ bụla na enweghị enweghị, gụnyere ndị ọrụ ụlọ ọrụ.
Na-agbakwunye ezokwa nke ezinụlọ LibreOffice Enterprise ga-eme ka ọrụ ndị na-eweta mpụga dị mfe nke ngwaahịa ewuru na LibreOffice maka azụmaahịa ma ga-eme ka ibu dị mfe na obodo nke ga-eji oge ha dozie nsogbu metụtara ụzọ LibreOffice si eji ụlọ ọrụ eme ihe.
N'ihi ya, a ga-enwe usoro ọmụmụ nke ndị na-eweta ọrụ nke ahụ na-enye ọrụ nkwado azụmahịa na LTS na-ebupụta maka ụlọ ọrụ chọrọ ọrụ dị otú ahụ.
Obodo LibreOffice na ngwaahịa ezinụlọ Enwere LibreOffice Enterprise na ikpo okwu LibreOffice Teknụzụ, nke na-eme dị ka otu koodu ntọala maka imepụta ọtụtụ ngwọta dabere na LibreOffice. Usoro koodu a ga - anabata mgbanwe ndị metụtara obodo na ụlọ ọrụ.
Ngwaahịa dabere na teknụzụ LibreOffice dị na ụlọ maka sistemụ arụmọrụ (Windows, macOS, Linux, na ChromeOS), nyiwe mkpanaka (gam akporo na iOS), yana iji dị ka ọrụ igwe ojii (LibreOffice Online).
Enwere ike ịnye ngwaahịa dị na LibreOffice Enterprise ezinụlọ n'okpuru aha dị iche iche, dabere na akara onye nrụpụta.
LibreOffice Community 7.1 Isi Akụkụ Ọhụrụ
Na ọhụrụ version nkwado maka standalone ndebiri emejuputara Ntọala mpaghara (ịsụpe nyocha na ntọala ndị ọzọ maka akwụkwọ ọhụụ dabere na asụsụ ahọpụtara na Onye Edemede, ọ bụghị na ntọala mpaghara nke usoro).
Agbakwunyere na ibuo ngwe mpịachi modeMgbe enyere ya aka, bọtịnụ nwere akụ na-egosi n'akụkụ isiokwu ahọpụtara na akwụkwọ ahụ. Pinye aka na bọtịnụ na-ada ada ederede na isiokwu na-esote, na ịpị aka nri dara ada ọdịnaya niile na isiokwu ọkwa ndị ọgbọ, gụnyere ndepụta okwu.
Iji rụọ ọrụ ya, ị ga-ebu ụzọ kwado nkwado maka ọrụ nnwale site na menu «Nhọrọ Ngwaọrụ ▸ LibreOffice ▸ Advanced», wee mee ka ọnọdụ ahụ site na «Ngwaọrụ ▸ Nhọrọ ▸ LibreOffice Writer ▸ View ▸» Gosi ihe ngosipụta ọdịnaya visibiliti ».
Agbakwunyere dialog "Ntinye" ọhụrụ, nke a na-eji n'akụkụ dị iche iche nke LibreOffice iji weghachite ọdịnaya ndị ọzọ site na nchekwa ndị dị na mpụga, dị ka ndọtị, akara ngosi, macros, ma ọ bụ ndebiri. Mkparịta ụka na-ewepụ mkpa ọ dị iji aka aka ibudata ma wụnye ndọtị site na Mgbakwunye Njikwa, na-enye gị ohere ịchọta ma wụnye ndọtị na otu pịa.
Banyere Dee mgbanwe:
Agbakwunyere Style Inspekta nke na-egosiputa àgwà niile maka paragraf na ụdị agwa, yana njirimara ịhazi usoro.
Nwere ike ịpịpụta ọdịdị dị n'akụkụ ala nke ibe ahụ.
Na menu «Ngwaọrụ ▸ Nhọrọ ▸ LibreOffice Writer ▸ Formatting aids» ọ ga-ekwe omume ịkọwa usoro ndọtị ndabara maka ihe oyiyi agbakwunyere.
Na-enye ụdị nchọpụta Unicode, ọbụlagodi mgbe ịbubata faịlụ ederede na-enweghị akara ngosi usoro byte (BOM).
Nkwado agbakwunyere maka usoro tebụl (maka obere ọrụ na MS Word): PRODUCT, ABS, SIGN and COUNT.
Agbakwunyere ikike iji gbanwee visibiliti nke aha ubi ndenye (Lee names Aha aha) na nkwado maka ịhọrọ ahịhịa efu na oke. Maka ogige kwekọrọ na Okwu, enwere ike ịgbanwe iji zoo iwu na nsonaazụ ya.
Chọọ ma dochie njikarịcha arụmọrụ.
Maka akwụkwọ PDF ochie emere na OpenOffice.org 2.2 na nsụgharị ndị mbụ, mbubata ndị na-agbanwe agbanwe tebụl akwụkwụ na tebụl ndị dị n'usoro, nke kachasị mma na usoro MS Word na HTML.
Site na mgbanwe Calc:
Gbakwunye ntọala iji gbanyụọ pasting site na ịpị Tinye (Ngwaọrụ ▸ Nhọrọ ▸ LibreOffice Calc ▸ General).
Na windo AutoFilter, ị nwere ike ịhọrọ ihe site na ịpị akara ọ bụla, ọ bụghị naanị akara ngosi nhọrọ.
E tinyela bọtịnụ "Tọgharia ihe niile" na mkparịta ụka Solver.
Mma ndochi nke merged mkpụrụ ndụ, nhọrọ na oyiri nke merged cell Ọdịdị.
INDIRECT arụ ọrụ ugbu a nwere nkwado maka aha ejiri na mpempe akwụkwọ dị ugbu a.
Omume emelitere maka ịsụpe ọgwụ na nyocha Autofilter.
Mgbanwe iji dọta ma see:
Nkwado agbakwunyere maka ihe eserese na-arụ ọrụ na ntanetị maka ịme anwansị physics, wee webata nsonaazụ animation ọhụụ dịka nkedo nkenke, ịda mba, na ibiaghachi n'ihe mberede.
Na Bịaruo maka faịlụ PDF agbakwunyere, agbakwunyere ihe ịrịba ama na e tinyela akwụkwọ na dijitalụ.
Mmetụta -enye gị ohere ịgbanwe na-aga aga nke ọtụtụ ihe n'otu oge.
Math na-agbakwunye ihe ntanetị ọhụrụ na ngalaba Element ma nye nkwado zuru oke maka agba HTML, ụfọdụ nwere ike ịhọrọ site na interface na Element panel.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » LibreOffice 7.1 bia na Edition Splitting, Experimental Features, na More
Google gosiputara ngbanwe nke oru ya na oku ozo nke cookies